Nhaurirano dzeZimbabwe Dzinotanga Zvakare muSouth Africa
Vari kumirira mapato matatu ari muhurumende yemubatanidzwa munhaurirano vari kusangana nechikwata chemuyananisi uye vari mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, muCape Town kuSouth Africa.
Mutauriri waVaZuma, VaZizi Kodwa, vabvuma kuti musangano uyu uri kuitwa uye vatiwo VaZuma vane chivimbo chekuti unobuda nezvichatambirwa nemativi ose.
Chinangwa chemusangano uyu ndechekugadzirisa hwaro hwesarudzo kana kuti Election Roadmap, uye kupedzisa misaridzirwa ichiri kukakavadzanwa muhurumende yemubatanidzwa.
Asi vane ruzivo nezviri kukurukurwa kumusangano uyu vanoti zvingangonetsa inyaya yezviri kudiwa nevamwe vari munhaurirano idzi zvekuti hutungamiri hwemabhodhi eZimbabwe Broadcasting Corporation, ZBC, neBroadcasting Authority of Zimbabwe, BAZ, hushandurwe sezvo hwakadomwa nemutungamiri weZanu PF, uye vari mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vasina vamwe vari muhurumende sezvinodiwa nechibvumirano cheGlobal Political Agreement.
Mapato maviri eMDC anonzi ari kudawo zvakare kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ivandudzwe sezvo Zanu PF yakadoma vamwe vanhu vanonzi vasori.
Pasi pechibvumirano cheGPA, Zimbabwe inofanirwa kuumba makomisheni nemabhodi zvichiitwa nenzira inotambirwa nevatungamiri vatatu vemapato ari muhurumende. Izvi ndizvo zviri kupa kuti pave nemutauro panyaya yeZBC, ZEC, neBAZ.
Imwe nyaya iri kutungamidzwa neZanu PF inyaya yezvirango, asi mumazuva apera, SADC yanga ichiita misangano nenyika dzinonzi dzakatemera Zimbabwe zvirango, paine chinangwa chekuti zvibviswe.
Vachitaurawo vari kuSouth Africa kumusangano weWorld Economic Forum on Africa kuCape Town, mutungamiri wehurumende, uye vari mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, vati vari kufadzwa nedanho ravati rakatorwa naVaZuma rekukwanisa kuvharidzira VaMugabe kuti vasaita sarudzo gore rino.
VaMugabe nebato ravo vakanga vapika kuti vachaita sarudzo gore rino nekuti muchato wemuGPA hausi kushanda. Asi MDC inoti sarudzo dzinoitwa chete kana pachinge pava nehwaro hwakajeka hwesarudzo, uye zvimwe zvinhu zvinofanirwa kugadziriswa, zvagadziriswa.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naVaWelshman Ncube, vanoti VaNhlanhla Dube, bato ravo rinoda kuona kuti zvinenge zvawiriranwa munhaurirano idzi zvazadziswa here, kwete kungowirirana mukutaura asi pasina zvinoitwa.
Mutauriri mutsva weMDC inotungamirwa naVaTsvangirai, VaDouglas Mwonzora, vaudzawo Studio7 kuti bato ravo riri kuda kuti musangano uyu ubude nehwaro hwesarudzo huchaita kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena.
Studio7 haina kukwanisa kubata mutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, kuti tinzwewo zviri kudiwa nebato ravo panhaurirano idzi.